“Santiago Solari waa inuu sii joogaa kooxda ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedka” – Karim Benzema – Gool FM
“Santiago Solari waa inuu sii joogaa kooxda ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedka” – Karim Benzema
Dajiye November 8, 2018
(Real Madrid) 08 Nof 2018. Weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in macalinka ku meel gaarka ah ee Santiago Solari uu sii wado shaqada tababarka ee Los Blancos ilaa dhamaadka xili ciyaareedka.
Hadalka Karim Benzema ayaa wuxuu imaanayaa kadib guushii ay kaga gaareen kooxda Victoria Plzen kulankooda 4-aad heerka group-yada ee tartanka Champions League.
“Waan ku faraxsanahay guusha iyo goolasha intaba, sidoo kale shaqsi ahaan waxaan soo bandhigay qaab ciyaareed fiican”.
“Kulanka wuxuu ahaa mid aad u adag, laakiin waxaan sameenay waxyaabo fiican ee kalsooni leh”.
“Waxaan u ciyaarnay si fiican kulankan, waatan Real Madrid oo qof kasta ay dooneyso inay aragto, balse kubada cagta ma ahan wax sahlan, mar walba waxay doonayaan inaan kulamo fiican ku qaadano garoonka Bernabeu, sidaas darteed waa inaan ka shaqeynaa sida aan u guuleysan lahayn kulamada soo aadan”.
Intaas kadib weeraryahanka reer France ee Karim Benzema ayaa wuxuu ka hadlay aragtidiisa kaga aadan macalinka ku meel gaarka ah ee Santiago Solari wuxuuna yiri:
“Haatan waxaan heysanaa kalsooni weyn, waa inuu sii joogo ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka”.
Maxaa Xalay kala qabsaday Jose Mourinho iyo xiddigaha Juventus???+SAWIRRO
RASMI: Barcelona oo shaacisay heerka dhaawaca Philippe Coutinho iyo mudada uu garoomada ka maqnaan doono